Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia » Ụgbọ oloko na -agbakọta na Tunisia na -apụ na 30 ma ọ bụ karịa merụrụ ahụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Rail njem • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia
Tunisia ụgbọ oloko
Ụgbọ oloko abụọ jikọtara na Tunisia taa, Tọzdee, Ọktoba 7, 2021, na -egbu ma ọ dịkarịa ala mmadụ 30 merụrụ ahụ. E burula ndị merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ 2 dị nso.
Mkpesa a mere na mpụga Tunis, isi obodo Tunisia, na mpaghara Megrine Riadh nke Ben Arous.
Enweela ọtụtụ mgbagha ụgbọ oloko na nso nso a na Tunisia nke butere ọnwụ na mmerụ ahụ.
Nke kacha njọ bụ n'afọ 2015 mgbe mmadụ iri na itoolu nwụrụ ebe ihe ruru otu narị merụrụ ahụ ka ụgbọ oloko dara na gwongworo.
Ihe mberede a mere na mpaghara Megrine Riadh nke Ben Arous, na mpụga isi obodo Tunis. Enweela ọtụtụ ego ụgbọ oloko na mba ahụ kemgbe ọtụtụ afọ.
Na Disemba 28, 2016, enwere nkwekọrịta n'etiti ụgbọ oloko na ụgbọ ala nke ụgbọ ala na -arụ Gọvanọ Nabeul Ụlọ ọrụ njem mpaghara. Mkpesa a mere na National Road 1 na Sidi Fathallah, agbataobi dị na Djebel Jelloud dị nso n'isi obodo Tunis. Mmadụ 5 nwụrụ ebe ihe ruru mmadụ 52 merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ. N'ime ndị nwụrụ, enwere ndị ọrụ ndị agha Tunisia 2, onye nnọchi anya Brigade na-emegide iyi ọha egwu, na nwanyị na nwa ọhụrụ.
Ọkụ ụgbọ oloko 2015
Mgbe nyocha nke Ministri Ụgbọ njem nke Tunisia nyochachara, ihe mere kpọmkwem e zoro aka na nkwekọrịta 2016 ahụ bụ oke ọsọ nke ọkwọ ụgbọ ala na enweghị nlebara anya na mkpu olu nke ụgbọ oloko ahụ nyere. N'ịga n'ihu, egbu oge n'ịrụzi ntụpọ ụgbọ okporo ígwè na ihe mgbochi akpaka yana enweghị nhazi na ndị ọchịchị gbasara mkpa maka akara ngosi nwa oge na enweghị onye nchekwa nọ na nrute ahụ bụkwa ihe kpatara mbibi ahụ.
Mkpesa kacha gbuo mmadụ mere na June 2015 mgbe mmadụ 19 nwụrụ na mmadụ 98 merụrụ ahụ. Nkwekọrịta a mere n'etiti ụgbọ oloko na gwongworo na El Fahs, Tunisia. Isi ihe kpatara ihe mberede ahụ bụ enweghị mgbochi na ngafe ọkwa.
Na Septemba 24, 2010, ụgbọ oloko Bir el-Bey dabara na ụgbọ oloko ọzọ na-abịa site na Sfax nke Tunisia na-eme ka ọ daa wee daa mgbe ụgbọ nke ọzọ kụrụ ya n'ụgbọ ọdụ ọdụ n'ọdụ ụgbọ oloko. Ihe mberede ahụ kpatara otu ọnwụ na mmadụ 57 merụrụ ahụ. Ihe kpatara mkpọka ahụ bụ ọhụhụ nke ọma n'ihi oke mmiri ozuzo.
Ndị ụlọ ọrụ ụgbọ oloko mba Tunisia na -amalite nyocha iji chọpụta ọnọdụ gbara mgbakọ taa wee chọta ndị kpatara ya.